Hondo yeconsoon yakachinja, asi mubvunzo unoramba uri mumwe chete: PlayStation kana Xbox?
Iyo nyowani nyowani iri pasina mubvunzo nzira yakanakisa yekuti vanhu vazhinji vapinde mumitambo. Muna 2021, kune sarudzo yakawanda kupfuura nakare kose: Iyo Dreamcast 5 uye Xbox Series X izvozvi zvakasimbiswa senge imbwa nyowani dzepamusoro dzenyika yemitambo yekutamba, asi Sony neMicrosoft havana kugadzirira kurega chizvarwa chekupedzisira izvozvi.
Unogona achiri nab a PS4 or PS4 Pro, ane Xbox One or Xbox One X uye unakirwe neyakawanda yakafanana mitambo uye maficha - kana iwe unogona kuramba iyo PlayStation / Xbox ecosystems zvachose, uye investa muNintendo chishamiso chinja or Chinja Lite. Kana iwe uchida kumirira kusvika Gumiguru, iwe unogona zvakare kutora nyowani nyowani Chinja OLED.
Nekudaro, chinyorwa ichi chiri kuzotarisa pane zvazvino nyaradzo kubva kwaSony neMicrosoft. Iyo PS5 uye Xbox Series X / S iri kubhururuka neyekucheka-kumucheto tech, asi nepo vaviri vagadziri vachiita zvakafanana zvipikirwa pamberi pekuita pamberi, michina pachayo mhuka dzakasiyana kwazvo.
Tichazovakandirana, tichifananidza zvese kubva pane zvakatarwa kuenda kumaraibhurari emitambo kuti tipe korona shasha uye tikubatsire kusarudza yakanakisa mutambo wekutamba iwe.
PS5 vs Xbox Series X: Ndeipi yaunofanira kutenga?
PS5 vs Xbox Series X: Kuenzanisa kwemutengo
Ngatitangei nezvinokosha. Iyo yakajairwa PS5 inodhura £ 449 ($499), nepo iyo PS5 Dhijitari Dhizaini (DE) ichidhura £ 359 ($399). Iyo Dhijitari Edhisheni koni haina dhisiki dhiraivha asi neimwe nzira yakafanana munzira dzese kune yakajairwa PS5. Izvo zvinhu zviri pachena kubva kuna Sony panguva ino kutenderera.
Kupfuura mumusasa weMicrosoft, zvinhu zviri zvishoma kujekeswa. Iyo Xbox Series X inodhurawo £ 449 ($ 499), asi Xbox Series S - Microsoft "digital edition" - inouya mu £ 249 ($299), Zvichiita kuti ive yakachipa inotevera-gen koni iwe yaunogona kutenga.
Iko kuponesa kunouya nemubhadharo, zvakadaro. Sezvatichatsanangura pazasi, iyo Xbox Series S haina simba rakanyanya kupfuura iyo Xbox Series X, uye sePS5 DE isina disc drive. Ivo vanotsvaga mutambo we4KK vachatofanira kutenga iyo inodhura modhi.
Izvo zvakare zvakakosha kuti utaure kuti kunyangwe kushomeka kwediski dhiraivhu kuchichengetedza mutengo pasi munguva pfupi, mukufamba kwenguva, iwe uchabhadhara yakawanda yemitambo yedhijitari - ivo vanowanzo kuve anodhura kupfuura vamwe vavo venyama. Iyi haisiyo nyaya hombe yeiyo Series S, sezvo Game Pass iine backlog yakakura yemadhijitari edhijitari, uye mazhinji-epamberi Xbox anosarudzira ivhu pane sevhisi kubva kutanga, asi zvichiri kukosha kurangarira.
Mukundi - Dhonza
Tichifunga nezvekuti mbiri mbiri PlayStation uye Xbox zvinyaradzo zvinodhura zvakafanana, vavhimi vekutengeserana vachatofanira kusarudza pakati peaya maviri "edigital edition" ekunyaradza pane. Parizvino, inova nhangemutange-ne-mutsipa: nepo Sony PS5 DE iine zvimiro zvakafanana neyavo mukoma, iri £ 110 inodhura kupfuura iyo Xbox Series S. Sarudzo yako inogona kuuya kuzoti iwe unogona kurarama pasina iyo mabhenefiti akapihwa kumashini anomira - isu hatina kukwanisa
$898.00 Tenga izvozvi
£ 550.00 Tenga izvozvi
$740.00 Tenga izvozvi
PS5 vs Xbox Series X: Kukosha kutsanangurwa
Tisati taenda kumberi, heino parutivi-ne-padivi specs kuenzanisa pakati pePS5 (uye PS5 Dhijitari Dhizaini), Xbox Series X uye Xbox Series S.
PS5 / PS5 DE Xbox Series X Xbox akateedzana s
CPU AMD Zen 2 (tsika) AMD Zen 2 (tsika) AMD Zen 2 (tsika)
maitikiro 3.5GHz (musiyano) 3.8GHz 3.6GHz
GPU AMD RDNA 2 (tsika) AMD RDNA 2 (tsika) AMD RDNA 2 (tsika)
Shandisa simba 10.28 teraFLOPS 12 teraFLOPS 4 teraFLOPS
ndangariro 16GB GDDR6 16GB GDDR6 10GB GDDR6
chengetedzo 825GB NVMe SSD 1TB NVMe SSD 512GB NVMe SSD
Chinja kumhanya 5.5GB / sec 2.4GB / sec 2.4GB / sec
Sezvauri kuona, iyo Xbox Series X ndiyo yakasimba simba koni, uye inoshandisa iro rakawedzera simba neinoshamisa mhedzisiro. Kunyangwe vese vanyaradzi vari kushandisa iyo imwechete AMD dhizaini kune ese ari maviri CPU neGPU, iyo PS5 inosvina zvishoma zvishoma kunze kwegadziriro, asi iine ace kumusoro kwayo sleeve: iyo inokatyamadza SSD.
Ehezve, kumhanya hakusi kwese, uye iyo Series X inowana mapoinzi ekupa 1TB yenzvimbo yekuchengetedza maringe nePS5's 825GB - kunyanya sezvo mitambo yazvino inogona kushandisa pamusoro pe100GB yenzvimbo.
Ikozve kune iyo Xbox Series S. Muchidimbu, bhajeti yeMicrosoft bhajeti ine simba rakapetwa katatu pane iyo Xbox Series X, zvichireva kuti haimhanye mitambo mukugadzirisa kwe4K. Panzvimbo iyoyo, inovavarira 1080p kana 1440p pakakwirira furemu mitengo kupfuura yekupedzisira-gen kongiri -kuita mitambo inomhanya zvisingaite zvakanaka asi pamatanho epasi.
Mukundi - Xbox Series X
Kungofanana neXbox One X pamberi payo, iyo Xbox Series X ndiyo yakasimba kwazvo koni yakambovakwa. Sony's PS5 inopa ingangove isingazivikanwe yemitambo ruzivo munzira dzakawanda, asi haigoni kuenzanisa Series X yemagetsi emabhiza akachena - kunyanya kana iyo oomph yekuwedzera ichishandiswa kufambisa zvimwe zvinoshamisa zvitsva. Izvo zvakati, iyo PS5's SSD inofanirwa kutaurwa pano nekuda kwekumhanya kwayo kunoshamisa.
PS5 vs Xbox Series X: Graphics
Ose ari maPS5 uye Xbox Series X anovimbisa rutsigiro rwezvisarudzo kusvika ku8K (kunyangwe pasina mitambo yeconsole inotsigira 8K panguva ino) uye nemitengo yemafreyimu anosvika ku120fps. Nekudaro, Zviri pachena kuti iwe unenge uchitamba yako nyowani koni pane 4K telly inotsigira furemu mitengo inosvika ku60fps; ino inzvimbo inotapira kwazvo yeanyaradzo nyowani, asi haina kupihwa. Ose ma consoles anofanirwa kujairana nemhando dzakasiyana dzemitambo, mimwe inodzvinyirira kupfuura mimwe.
Sezvaungatarisira, iyo Xbox Series X inotanga kuendesa zvakanyanya pano, kunyangwe iyo PS5 inoshandisa huchenjeri hwehunyanzvi hwekunyepedzera (unonzi "checkerboarding") kuripa iyo shoma kushomeka kwesimba, ichipa kunyepedzera kwe4K zvinoonekwa kunyange zvichikwanisa ' t kuburitsa yechokwadi 4K.
Uye zvakare, ese maviri ekunyaradza anotsigira nyowani magiraidhi ekushandura nzira inonzi ray yekutsvaga, iyo inovandudza zvakanyanya mu-mutambo mimvuri, kuratidzira uye mwenje.
Mukufananidza neazvino maTV e4K, iyo Xbox Series X inotsigira matekinoroji maviri akagadzirirwa kugadzirisa ruzivo rwako rwemitambo. Auto Low Latency Mode (ALLM) inosvitsa TV yakabatana kuti ichinje yega kune yayo "mutambo modhi". Variable Refresh Rate (VRR), zvakadaro, inobvumira TV neconsoon kuenzanisa yavo furemu / zororo mitengo, ichidzivirira chiitiko chinonzi "screen kubvarura" - inooneka kusanganisa pachiratidziri.
Parizvino, iyo PS5 haitsigire kana ALLM kana VRR, kunyangwe iyo yekupedzisira ichidiki nekuda kwekuuya mune ramangwana software yekuvandudza.
Iyo Series X zvakare inotarisira maPC gamers nekupa vashandisi nemitambo monitors sarudzo yekuvhara resolution pa1440p - mimwe mitambo yeSony ichatamba pa1440p, asi izvi hazvigadziriswe.
Kusvikira panguva yakadai iyo PS5 inotsigira ese ari maviri ALLM neVRR, iyo Xbox Series X ichagara ichibuda pamusoro muchikamu chino.
PS5 vs Xbox Series X: Ruzivo rwevashandisi
Sony neMicrosoft zvinosiyana zvakanyanya panguva ino. Iyo nyowani mushandisi yePS5 inoratidzira yakanyanyisa kugadziridza yePS4 yakaneta menyu bar. Nokubata akakosha marongero uye mamamenyu kure mune nyowani 'Kudzora Bhawa', Sony yadzvanya iyo yekumba skrini, ichisiya imwe nzvimbo yemitambo yako, kubudirira kubudirira uye midhiya.
Iyo nyowani yePS5 UI inovanzawo mashoma mapfupi. Mitambo inowirirana inogona kubhuroka mumasekondi yakanangana nenyika yekuchengetedza (kusvetuka mamenu emutambo) kuburikidza neyakaitika Game Hub, uye iwe unogona kuchinjanisa pakati pemitambo iyi yekuchengetedza nyika nekukurumidza kuburikidza neNew Game Switcher muDhijitari menyu. Varaidzo uye zvimwe midhiya izvozvi zvakaiswa mune yakasarudzika tebhu, nepo yako yekutora gallery inowanikwa ipapo kuburikidza neye nyowani uye yakavandudzwa mutambo wekutapa menyu.
Microsoft, kune rumwe rutivi, inonzwa kuti izvo zvisina kutyorwa hazvidi kugadziriswa. Iyo Xbox Series X's menyu ingango fanika neiyo yeXbox One, izvo hazvo hazvireve hazvo kuti chinhu chakaipa zvachose. Iyo inoshandisa iyo imwecheteyo tile kuronga uye inogadzira iyo yakafanana pop-up menyu bar kuruboshwe-ruoko rwerutivi rwechidzitiro chako paunorova iyo Xbox bhatani mune-mutambo, futi.
[Chikwereti chemufananidzo: Microsoft]
Kufanana neiyo nyowani yePS5 UI, zvisinei, iyo Xbox's mushandisi interface inovanza zvimwe zvakashambidzika maficha, mukuru pakati payo ndeye Kurumidza Kutangazve. Izvi zvinobvumira vatambi kusimudza nekudonhedza kusvika kumitambo mishanu panguva imwe chete vasina kuvhara kana imwe chete.
Mukundi - PS5
Hapana chakakanganisika neruzivo rweMusic - haina kungochinja. Iyo PlayStation UI panguva iyi yakave neinoshanda, inooneka inokwezva inokwidziridzwa inokodzera iyo PS5 kune tee pasina kutsauka kure kure neyakatangira.
PS5 vs Xbox Series X: Mitambo (yakadzokororwa muna 2021)
Pavakatanga kudzoka muna2020, kana iyo PlayStation 5 kana Xbox Series X yaive nezvakawanda munzira yemazita akasarudzika. Iyo PS5 yakamhara padivi Midzimu yeDhimoni, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, uye Sackboy: A Big Rwendo - ayo ekupedzisira maviri ayo akauyawo kuPS4 - uye iyo Series X yaivimba chete kune wechitatu-bato uye kumashure-anowirirana mazita.
Mumwedzi kubva ipapo, runyorwa rwemazita ezvese zvinyaradzo rwakawedzera zvishoma nezvishoma, asi zvakadarowo nenhamba yemazita akanonoka kuita 2022.
Iyo Xbox Series X yakagamuchira yayo yekutanga yakasarudzika pakutanga kwegore rino, iine chaicho-kurwisa chinotyisa mutambo, Pakati. Nezveramangwana, pane zvakawanda zvekunakidzwa nezve: Forza: Horizon 5 uye Halo: haaperi ndivo vachiri hitters hombe, kunyangwe Forza chete akagamuchira zuva rakaburitswa kuburitswa (Mbudzi 5th 2021), nerunyerekupe rwuri kutenderera kuti Halo achasundirwa muna 2022. Kuwanikwa kweMicrosoft yeZeniMax Media kunounza dzinenge mbiri mbiri mbiri muna 2022 - Bethesda's Starfield uye yaArkane redfall - asi izvi hazvizadzise mukaha muhombe iyo Series X inayo muna 2021.
Game Pass ichiri nharo yakasimba yekusarudza iyo Series X, nemazana emitambo kubva kune ese Xbox mazera akagadzirira kutamba. Izvi zvichabatanidzwa nekusunungurwa kweconsole kwe Microsoft Flight Simulator musi waChikunguru 27, pamwe neyakavanzika-nyeredzi indie yekuuraya 12 Minutes, iri kuuya Nyamavhuvhu 19, zvese zviri zviviri zvichave zviripo pane sevhisi kubva kuvhurwa.
Zvinhu zviri kudivi raSony zvakati simbei, nehafu yekutanga ya2021 ichiona maviri makuru akasarudzika - Kudzosera uye Ratchet uye Clank: Simudza Kunze - uye mwedzi inotevera iri kuunza musanganiswa wemitambo yePS4 yakadai se Ghost weTsushima: Iyo Dhairekitori Yocheka uye Yekupedzisira Kufungidzira 7 Remake: Kupindirana, uye mitambo mitsva senge deathloop. Mumwe mutambo weBethesda, deathloop inotarisirwa kuti iuye kuChikamu X pakupedzisira, asi yakanyorwa sePS5 yakasarudzika kusvika munaSeptember 2022.
ne Mwari weHondo: Ragnarok uchangobva kunonoka kupinda muna 2022, kupera kwegore ndekwe Kupenya: Yakarambidzwa West. Pamwe. Zviri nyore mutambo unotarisirwa wePS5 wegore, iyi robo-dinosaur adventure parizvino iri muchikepe chimwe chete naHalo: Isingagumi, mukuti hwindo rekuburitsa richiri 2021 chete, saka zvinokwanisika kuti isu tichaona kunonoka kusvika muna 2022 pamberi pe gore rakabuda.
Kusvika Microsoft yatora ZeniMax Media yatanga kubereka michero, Sony ichaenderera mberi nekukanda musika pamitambo yepamusoro yepamusoro. Tichirambidza chero shanduko inoshamisa maererano nemazuva ekuburitswa, isu tichapedzisa 2021 nehuremu hwakaunganidzwa hwePS5 yakasarudzika, nepo Series X ichivimba zvakanyanya paGame Pass kusvika muna 2022. Zvinhu zvinogona kunyatso shanduka gore rinouya, asi parizvino, Sony ndiyo kujekesa mukundi maererano nemutambo mutsara.
PS5 vs Xbox Series X: Vanodzora
Dhavhidha nyowani yaDualSense yaSony yakonzera kusagadzikana. Kucherekedza kwakakosha kuenda kubva kune yakatangira, iyo DualSense ipadhi inokatyamadza: musoro wenyaya pano ndezvitsva zvinogadzirisa zvinokonzeresa, izvo zvinogona kuomarara kana kuve nyore kutsikirira zvichienderana nezvauri kuvashandisira. Iyo DualSense zvakare ine yakavakirwa-mukati maikorofoni ine mbeveve bhatani, pamwe neyakagadzirwa mameseji kunzwa, akakwidziridzwa rumble motors uye USB-C yekuchaja chiteshi.
Munguva pfupi yapfuura, uye mushure mehurefu hwakawanda kubva kune vateveri, Sony yakazivisa miviri mitsva mitsva yeDualSense controller: Cosmic Red neMidnight Black. Kunyangwe isiri chigamba pane iyo kara yemhando uye sarudzo dzekugadzirisa dzinowanikwa dzeiyo Series X, izvi zvirinani zvinoratidza kuti Sony iri kunanga munzira kwayo - heino tarisiro yekuti vanoteedzana nemavheji anotsiviwa echikoni munguva pfupi.
Iyo Xbox Series X Core gamepad ndiyo chaiyo yakapesana. Inenge yakafanana neyaakatangira, iyo nyowani yemupadhi yakange iri pasi peavo vashoma akapfava tweaks: ikozvino yaita mutambo iwoyo wedireti padhi seye Xbox Elite 2 mutungamiriri, pamwe neakashongedzwa mavara, rakazvitsaurira bhatani bhatani uye - iwe wafungidzira - USB -C kubhadharisa chiteshi. Kusiyana neDualSense, iyo Xbox Series X inodzora haina kudzoreredzwa uye pachinzvimbo inoshandisa mapaundi eAA mabhatiri.
Kune chikwereti chayo, Microsoft yakagara iri nzvimbo yekuenda yekusiyana mukugadzirisa dhizaini, uye zvinhu hazvina kuchinja neChinyorwa X. Chazvino Xbox controller chinowanikwa mune mashanu akaenzana mavara - Carbon Nhema, Robhoti White, Pulse Tsvuku, Shock Bhuruu neMagetsi Volt- uye kana pasina chimwe chazvo chinorova chinoshamisira, unogona kuenda kune iyo Xbox Dhizaina Lab uye gadzira yako wega tsika mutongi.
Imwe sarudzo huru ndeye Adaptive Controller, hubhu hwakabatana hwakagadzirirwa kuita kuti mitambo ive nyore kune vashandisi vane kufamba kushoma. Uku kutarisisa pamitambo inochinja-chinja kunoenderera neRazer Kishi, iyo inonyanya kushandura yako Android foni kuita yeNintendo Shandura-senge chishandiso, ichikubvumidza iwe kutenderera mitambo kubva kukoni yako uye kuitamba uchienda.
Iko hakuna makwikwi pano: nepo Xbox Core pad iri rakanakisa mutungamiriri mune rayo chairo, uye inounza hwakawanda huwandu hwemavara, iyo DualSense inovandudza, ichivaka pane yakasimba DualShock 4 kuburitsa chaiyo inoshamisa chidimbu chekiti.
VERENGA NEXT: Vedu vatinofarira Xbox Series X vatongi
PS5 vs Xbox Series X: zvishongedzo
Ingoitira kuti kuburitsa mazana pane inopenya nyowani koni hakuna kukwana pamubhadharo iwe, ese ma consoles anopawo sarudzo yakakura yezvishongedzo. Kunyange pasina chimwe cheizvi zvigadzirwa zvekuwedzera chiri chinodiwa kune inotevera-gen mutambo, ivo vanogona kusimudzira ruzivo nekuwedzera pazvinhu zvekunyaradza.
Mutambo we PlayStation 5 wakaratidza kusimbisa kukuru ku synergy pakati peconsole uye zvishongedzo, kuvazivisa vese pamwe chete, neyakaunganidzwa dema uye chena ruvara sisitimu yemhando yepamusoro. Chiziviso chakaratidza iyo PULSE 3D Wireless headset, iyo yakagadzirirwa 3D odhiyo, ichikubvumidza iwe kuti unyatsoita zvakanyanya muPS5's Tempest 3D AudioTech. Kune vakawanda, iyo headset zvakare ine maviri ruzha-kudzima mamaikorofoni, uye iyo inobhadharisa kuburikidza ne USB-C kubatana.
Zvakare zvaisanganisirwa paziviso iyi yaive nhepfenyuro iri kure, ine mabhatani akazvipira ekukurumidza kuvhura Disney +, Netflix, Spotify neYouTube, chiteshi chechaji chevatungamiriri vaviri veDualSense, uye HD kamera, iyo inoshandisa kumashure kwePS5-kubvisa maturusi ekushambadzira kwe Gameplay. Kune varidzi vePSVR, unogona zvakare kutora adapter yemahara iyo inoita kuti iwe ushandise yako PSVR kamera nePS5, nekupinda serial nhamba yeyako VR unit pano.
Pane iyo Series X padivi pezvinhu, kutanga kumusoro kune iyo Xbox Wireless Headset, inozvirumbidza ye12-15 yeawa bhatiri hupenyu uye yakanangana kubatana kune yako koni, saka hapana kudiwa kwekuwedzera dongle. Iyo odhiyo inoburitsa ine muviri wakakwana uye kujekesa kutora zvese zvemitambo zvemitambo yako, uye iyo headset inoenderana neese Xbox mhuri, ichikusiya wakasununguka kuti uishandise pane akawanda consoles.
Zvakare zvakanyanya kukosha kutaura, iri Seagate Kuchengeta Kadhi rekuwedzera. Inoenderana nezvose zviri zviviri Series X uye Series S, iri kadhi rinopa imwezve 1TB yekuwedzera nzvimbo yekuchengetera, pasina kukanganisa kukurumidza uye mashandiro emukati SSD. Tichifunga kuti Series X yaive yatove pamberi pePS5 maererano nekuchengetedza, iri rimwe danho kumusoro kweMicrosoft munhandare yeSSD.
Sezvo nekuenzanisa kwakawanda pano, iyi ichave iri nyaya yezvinonyanya kukosha kwauri. Kana iwe uchida kuve nemitambo yakawanda yakagadzirira kutamba chero nguva yakapihwa, saka iyo Series X ine yakanyanya kukureka chengetwa yako. Kana iwe uchinyanya kufarira 3D odhiyo uye yakasanganiswa kuwana kumasevhisi masevhisi, kana iwe uri kufunga nezve kutora PSVR headset, ipapo iwe uchazoda kuenda kuPS5.
PS5 vs Xbox Series X: Multimedia
Nhau dzakanaka: ese ari maviri Xbox Series X uye iyo PS5 yakanakisa kune vanofarira mafirimu mafirimu uye vakazvipira veNetflix bingers. Ose ari maviri anotsigira akajairwa gamut ekushambadzira masevhisi - Netflix, Prime Vhidhiyo, Iyezvino TV, Disney Plus, Apple TV Plus uye zvichingodaro - kunyange hazvo izvo zvisati zvakadaro console inotsigira BBC iPlayer.
Panyaya yekutsigira macinephiles epamba, ese ma consoles anotsigira Dolby Atmos mune imwe nzvimbo, kunyangwe chete Xbox Series X ichachinjisa kutepfenyura sevhisi odhiyo NEBlu-ray odhiyo kuburikidza neAtmos (iyo PS5 inongotsigira iyo yekupedzisira). Mamwe mafomati anotsigirwa akapoteredzwa anosanganisira 5.1, 7.1, DTS: X (zvakare, bhuru-rays chete paPS5) uye Sony's yekudyara Tempest injini yemutambo odhiyo pamwe chete nePulse 3D headset.
Sezvo isu tanga tamboreva, ese maviri ekunyaradza pakupedzisira anotsigira 4K blu-ray disc kutamba. Ivo vaviri vanogona zvakare kutamba mitambo uye mabhaisikopo muHigh Dynamic Range (HDR10) yemavara akapfuma, kunyangwe chete iyo Xbox Series X inotsigira iyo Dolby yake HDR fomati, Dolby Vision.
Iyo Microsoft koni inoikunda nerubatsiro rwe yakazara Dolby ruzha uye mafomati ekuona. Kunyangwe Sony yaita shanduko hombe pamusoro pePS4, iyo yaishaya 4K blu-ray player, iyo Xbox Series X ichiri sarudzo inofarira yemufirimu.
PS5 vs Xbox Series X: Mutongo
Mhedziso yedu yakapusa. Uine matatu anokunda mumwe chete uye maviri anodhirowa, hapana akahwina anokunda. Ndine urombo, vanhu, zvave padhuze kufona: iyo yakanakisa mutambo wekutamba kwauri panguva ino kutenderera ndiyo inoita chaizvo zvaunoda iwe.
The Xbox Series X izere pasuru, mudziyo wevaraidzo unokwanisa kupa kune wese munhu. Haisi iyo inonakidza kwazvo koni, uye munzira dzakawanda, haizonzwa zvakanyanya kusiyana neyaakatangira, asi hapana chekudzivirira chokwadi chekuti ine simba rinotyisa uye rakashongedzwa zvakanaka. Iyo yekukura-kumusoro koni.
The PS5, Zvichakadaro, iri kure uye iri kure sarudzo yakakurumbira. Nezvikonzero zvatisingazive kwatiri, koni nyowani yaSony yakagadzira buzz zvekuti zvave kusakwanisika kuiwana kubva kutanga. Haina simba senge Series X, asi inonzwa zvakanyanya kuita senge nyowani, inonakidza mitambo koni - iyo yakagadziridzwa UI, inovandudza controller uye inoshamisa dhizaini dhizaini pano. Uye ngatirege kukanganwa kuti maLeigi ari pamberi maererano nemitambo yakasarudzika.
Iyo PS5 inongova nzvimbo yekutora inotevera-gen mitambo izvozvi, uye izvo zvoga zvinogona kuva chikonzero chakakwana kuti uzviwanire wega (kana uchikwanisa). Asi usati waita, usabvisa Xbox Series X - zvisinei nezvose, iri rakakomberedzwa rakashongedzwa.
PS5 kusunungurwa zuva, specs, nhau uye maficha eSony's PlayStation 5
Sony PlayStation: Zvese zvaunoda kuti uzive nezveSony yemitambo yekunyaradza